iPhone Video Editor: Easily Dezie iPhone Video on PC
> Resource> Video> Olee dezie iPhone (iPhone 5 / 5c / 5s) Video on PC
Olee otú dezie iPhone (iPhone 5 / 5c / 5s) Video on PC
Gbara ụfọdụ gbara ọkpụrụkpụ videos na gị iPhone, ma na-achọ Stitch ọnụ ike ọhụrụ video? Ọ bụrụ na ị na mgbe dezie video na ụfọdụ iPhone edezi ngwa ọdịnala dị ka Splice, iMovie, ma ọ bụ ihe ọ bụla tupu, ị ga-ama otú na-egbu mgbu ọ pụrụ ịbụ ime mfe aga-eme. Ọzọkwa, cellphone ngwa ọdịnala na-emekarị na nnọọ ụkọ atụmatụ, nke nwere ike igbo gị mkpa. Ebe ọ bụ na ọ bụ obere bit crazy dezie na na gị iPhone, ka anyị hụ ihe a desktọọpụ ngwa nwere ike ime n'ihi unu: Wondershare Video nchịkọta akụkọ (Video nchịkọta akụkọ nke Mac). Ọ bụ a ngwa ngwa, fun, ma dị ike iPhone video nchịkọta akụkọ nke PC na nwere ike ngwa ngwa atụgharị gị videos n'ime ọkachamara-na-achọ fim na bulite ha ozugbo na YouTube. N'okpuru ebe m ga-ewebata ụfọdụ n'ime ya isi atụmatụ.
Ike Desktọpụ iPhone Video Editor:
Mfe ewepụtụ, bugharia, akuku, jikota na ikpokọta gị iPhone video faịlụ;
Tinye pụtara ederede, iyo, Intro / Ebe e si nweta na mgbanwe mmetụta jupụta iPhone video faịlụ;
Nye elu mmetụta dị ka Tilt-nnofega, Mozis, ima elu he, Face-apụ, na ndị ọzọ;
Bulite dezie iPhone videos jidesie Facebook na YouTube, ọkụ na-DVD ma ọ bụ chekwaa na ndị ọzọ formats.
Ntak emi Họrọ Wondershare iPhone Video Editor
Nke a na usoro-abịa na a nkecha na mfe na-eji interface na-ahapụ gị dezie iPhone video rụọ ọrụ nke ọma. Ọ ga-ewe oge dị ukwuu n'ihi na ị na-eji ya.
Dezie & Eme Videos
Na niile kemfe video edezi ngwaọrụ, ị nwere ike mfe ime ka a ọmarịcha nkiri si nke nkịtị foto na vidiyo gbara na gị iPhone (iPhone 4S / 5 / 5C / 5S gụnyere).
Fantastic visual mmetụta
Nke a iPhone video nchịkọta akụkọ na-ahapụ gị mfe ime ka gị na iPhone video ọzọ polished na ọkachamara site na àjà 300+ egwu ikwu n'ụzọ, utu aha na mmetụta.
Share videos n'ebe nile
Mgbe video edezi a mere, ịzọpụta video ka a dakọtara usoro maka playbacking na ma na kọmputa na obere ngwaọrụ, bulite ya ozugbo na online ma ọ bụ ọkụ na-DVD.
Olee otú dezie iPhone Videos on PC:
1. Kpaa ma ọ bụ kewaa a iPhone video clip
Ọ bụrụ na ị chọrọ ewepụtụ video ka kpọmkwem ogologo, pịa video clip, òké n'elu ya ekpe ma ọ bụ nri ihu na-egosi "Ugboro abụọ akụ" egosi, na mgbe ahụ ịdọrọ ya ọ bụla ogologo ị chọrọ.
Gbawaa video clip, mkpa ka ị họrọ ya site na ịpị, ịdọrọ n'elu nke red Time egosi ọ bụla ọnọdụ ị chọrọ, wee pịa "scissor" button.
2. akuku, bugharia na-agbanwe video / audio ntọala
Right pịa iPhone video faịlụ na usoro iheomume iji bugote video na ọdịyo edezi panel. Ebe a, ị nwere ike bugharia ma ọ bụ na akuku video, ịgbanwe ìhè, saturation, iche, ngwa ngwa ma ọ bụ adị n'elu ebre ọsọ, setịpụrụ audio pitch, olu, ịjụ oyi na / si, na ndị ọzọ.
3. Metụ gị video na music, akụkụ Akwụkwọ Nsọ, Intro / Ebe E Si Nweta na ndị ọzọ
Mụrụ music ga tinye a n'ezie mma aka gị video. Ịnwere ike ịdọrọ na dobe dị music ka music track, na nke a ga-eme ka music na-egwu tinyere gị video. I nwekwara ike ịgbakwunye okwu na-akọwa ihe, ma ọ bụ nanị tụọ ihe na-akpali. Iji mee nke a, dị nnọọ pịa "Text" bọtịnụ na ngwá ọrụ mmanya, ikpuru-n-dobe a ederede mmetụta ederede track na-abanye na okwu gị. E wezụga music na akụkụ Akwụkwọ Nsọ, na-eche free tinye Intro / Ebe e si nweta na ikwu n'ụzọ mmetụta site pịa taabụ n'elu usoro iheomume.
4. Tinye Mozis, ima elu Cut, Tilt-Mgbanwe, na Face-apụ
Ma ọ dị mkpa, nri pịa ma họrọ "Ike Ngwá Ọrụ" ma ọ bụ ozugbo pịa "Ike Ngwá Ọrụ" bọtịnụ n'elu usoro iheomume itinye elu ndị ọzọ mmetụta dị ka nso-elu, ima elu Cut, Tilt-Mgbanwe, Mozis, na Face-apụ gị footage.
Video Tutorial: Olee dezie iPhone Videos on PC
Top 5 Free iPhone Video Rotators
Olee otú bugharia iPhone Videos
Olee otú mpikota onu Video
Olee otú Tinye Audio ka Video Files
Olee otú Jikọọ Video Files
Top 5 Free Ndepụta Okwu Editor Ngwaọrụ n'ihi Your Video edezi
Top 3 Free Video Editors maka iPad, iPhone, iPod Touch
Olee otú Mee ngwa ngwa / Fast Motion Videos